၁၀ရက်အတွင်း ၂၂ပေါင်ကျအောင် ၀ိတ်လျှော့မယ် - CantWait2Say
၁၀ရက်အတွင်း ၂၂ပေါင်ကျအောင် ၀ိတ်လျှော့မယ်
Beauty, Health March 13, 2018
ပြောချင်လွန်းလို့ရဲ့ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပိုတွေရှိလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေရှိလား? ဝယ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေ မတော်တော့ဘူးလား? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဝလာတယ်လို့ ထင်နေပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့။ အောက်မှာပြောပြထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးအတိုင်းသာလုပ်။ ၁၀ရက်အတွင်း အဟုတ် (၂၂)ပေါင်ကျစေရမယ်။
ဒီတော့ Diet Planလေးရဲ့ နာမည်က 900 ကယ်လိုရီတဲ့။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ တစ်နေ့လုံးမှာ 900 ကယ်လိုရီပဲစားရမယ်။ တစ်နေ့ကို 900 ကယ်လိုရီစားပြီး ၁၀ရက်အတွင်း ၂၂ပေါင်ကျအောင်လုပ်ယူတဲ့နည်းလေးပေါ့။
မနက်ပိုင်းမှာစားရမယ့်အစားအစာကတော့ ဘဲဥဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် ကြက်ဥဖြစ်ဖြစ် ပြုတ်ပြီးစားရပါမယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဥရွေးစား။ (၃)လုံးထက်တော့ မပိုရဘူးနော်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘဲဥပြုတ်တစ်လုံးရဲ့ ပျှမ်းမျှကယ်လိုရီက ၇၀ကယ်လိုရီရှိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဘဲဥပြုတ် (သို့)ကြက်ဥပြုတ် (၃)လုံးစားလို့ရတယ်။ ပြီးရင် မနက်တိုင်းသောက်နေကျ လက်ဖက်ရည်လေးအစား Green Teaလေးတစ်ခွက်သောက်လို့ရတယ်နော်။ ဒါကြောင့် မနက်ပိုင်းစားရမှာက ဘဲဥပြုတ်(၃)လုံး၊ Green Tea (၁)ခွက်ဆိုလုံလောက်ပြီ။
နေ့လည်စာကတော့ ထမင်းစားလို့မရဘူးနော်။ ဝိတ်တက်လာတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ အစားကြီးတာလည်းပါတယ်။ ၁၀ရက်လောက်တော့ အောင့်အည်းနေမှရမယ်လေ။ နေ့လည်စာအဖြစ်ဘာစားရမလဲဆိုတော့ ကြက်ဥပြုတ် ဒါမှမဟုတ် ဘဲဥပြုတ်(၃)လုံး၊ ပန်းသီးတစ်လုံးရယ်၊ Green Teaတစ်ခွက်ရယ်ဆို နေ့လည်စာအတွက် အိုကေပြီ။
ညစာကအရေးကြီးသွားပြီနော်။ ဝိတ်တက်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ ညစာအများကြီးစားလို့လည်းပါတယ်။ ဒီတော့ ညနေ (၆)နာရီမကျော်ခင် ညစာအနေနဲ့ ဆန်ပြုတ်လေးတစ်ခွက်လောက်တော့ သောက်။ ဆန်ပြုတ်တစ်ခွက်ဆိုလို့ တိုင်ကီကို ဂိုင်းတပ်ပြီးတစ်ခွက်လို့တော့ မလုပ်နဲ့နော်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထည့်တဲ့ ပန်ကန်လုံးဆိုဒ်လောက်နဲ့ တစ်ခွက်ကိုပြောတာ။ပန်းသီးတစ်လုံးစား။ ဒီကြားထဲမှာ ဗိုက်နည်းနည်းဆာတယ်ထင်ရင် မုန်လာဥဖျော်ရည်တို့ သခွားသီးဖျော်ရည်တို့ သောက်လို့ရသေးတယ်နော်။ပြီးရင် အိပ်ရာမဝင်ခင် တစ်နာရီအလိုမှာ Green Teaလေးတစ်ခွက်လောက်ကို ဘီယာလိုသဘောထားပြီးသောက်။ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။
ဒီတော့ ကိုယ့်တစ်နေ့လုံးစားထားတာ ဘယ်လောက်ကယ်လိုရီရှိလည်း သိချင်မှာပေါ့။ အောက်မှာရေးပေးထားတယ်နော်။ တစ်နေ့ကို ၉၀၀ကယ်လိုရီကွက်တိပဲ။
ပန်းသီး (၂)လုံး – ၂၃၀ကယ်လိုရီ
ဘဲဥပြုတ် (၆)လုံး – ၄၅၀ကယ်လိုရီ
Green Tea – ၀ ကယ်လိုရီ
ဆန်ပြုတ်တစ်ခွက် – ၁၆၀ကယ်လိုရီ
မုန်လာဥဖျော်ရည် – ၃၀ကယ်လိုရီ
သခွားသီးဖျော်ရည် – ၃၀ကယ်လိုရီ
စုစုပေါင်း – ၉၀၀ကယ်လိုရီ
တချိူ့ Diet Planတွေက လနဲ့ချီပြီးကြာတတ်တယ်နော်။ ဒီနည်းလေးက ၁၀ရက်အတွင်း အဖြေပေါ်တာဆိုတော့ အဖြေကိုစောစောသိရတာပေါ့။ ကဲ လှချင်တဲ့သူတွေကတော့ ၁၀ရက်လောက်အပင်ပန်းခံလိုက်တာနဲ့ (၂၂)ပေါင်ကျပြီး ဂေါ်သွားမှာအမှန်ပဲ။ (၁၀)ရက် အတွင်း ယောင်္ကျားလေးဆို စော်ကြည်၊ မိန်းကလေးဆို ဘဲကြည်ဖြစ်အောင် စမ်းလုပ်ကြည့်သင့်တယ်နော်။
အခု တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ၁၀ရက်အတွင်း ၂၂ပေါင်ကျအောင် ၀ိတ်လျှော့နည်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွောခငျြလှနျးလို့ရဲ့ စာဖတျသူတှထေဲမှာ ခန်ဓာကိုယျမှာ အဆီပိုတှရှေိလို့ စိတျညဈနတေဲ့သူတှရှေိလား? ဝယျထားတဲ့ အဝတျအစားတှေ မတျောတော့ဘူးလား? ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဝလာတယျလို့ ထငျနပွေီလား? ဒါဆိုရငျတော့ စိတျမပူပါနဲ့။ အောကျမှာပွောပွထားတဲ့ နညျးလမျးလေးအတိုငျးသာလုပျ။ ၁ဝရကျအတှငျး အဟုတျ (၂၂)ပေါငျကစြရေမယျ။
ဒီတော့ Diet Planလေးရဲ့ နာမညျက 900 ကယျလိုရီတဲ့။ အဓိပ်ပာယျကတော့ တဈနလေုံ့းမှာ 900 ကယျလိုရီပဲစားရမယျ။ တဈနကေို့ 900 ကယျလိုရီစားပွီး ၁ဝရကျအတှငျး ၂၂ပေါငျကအြောငျလုပျယူတဲ့နညျးလေးပေါ့။
မနကျပိုငျးမှာစားရမယျ့အစားအစာကတော့ ဘဲဥဖွဈဖွဈဖွဈ ကွကျဥဖွဈဖွဈ ပွုတျပွီးစားရပါမယျ။ ကိုယျကွိုကျတဲ့ ဥရှေးစား။ (၃)လုံးထကျတော့ မပိုရဘူးနျော။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဘဲဥပွုတျတဈလုံးရဲ့ ပြှမျးမြှကယျလိုရီက ရဝကယျလိုရီရှိတယျလေ။ ဒါကွောငျ့ ဘဲဥပွုတျ (သို့)ကွကျဥပွုတျ (၃)လုံးစားလို့ရတယျ။ ပွီးရငျ မနကျတိုငျးသောကျနကြေ လကျဖကျရညျလေးအစား Green Teaလေးတဈခှကျသောကျလို့ရတယျနျော။ ဒါကွောငျ့ မနကျပိုငျးစားရမှာက ဘဲဥပွုတျ(၃)လုံး၊ Green Tea (၁)ခှကျဆိုလုံလောကျပွီ။
နလေ့ညျစာကတော့ ထမငျးစားလို့မရဘူးနျော။ ဝိတျတကျလာတဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ အစားကွီးတာလညျးပါတယျ။ ၁ဝရကျလောကျတော့ အောငျ့အညျးနမှေရမယျလေ။ နလေ့ညျစာအဖွဈဘာစားရမလဲဆိုတော့ ကွကျဥပွုတျ ဒါမှမဟုတျ ဘဲဥပွုတျ(၃)လုံး၊ ပနျးသီးတဈလုံးရယျ၊ Green Teaတဈခှကျရယျဆို နလေ့ညျစာအတှကျ အိုကပွေီ။
ညစာကအရေးကွီးသှားပွီနျော။ ဝိတျတကျစတေဲ့ အကွောငျးရငျးတှထေဲမှာ ညစာအမြားကွီးစားလို့လညျးပါတယျ။ ဒီတော့ ညနေ (၆)နာရီမကြျောခငျ ညစာအနနေဲ့ ဆနျပွုတျလေးတဈခှကျလောကျတော့ သောကျ။ ဆနျပွုတျတဈခှကျဆိုလို့ တိုငျကီကို ဂိုငျးတပျပွီးတဈခှကျလို့တော့ မလုပျနဲ့နျော။ လကျဖကျရညျကွမျးထညျ့တဲ့ ပနျကနျလုံးဆိုဒျလောကျနဲ့ တဈခှကျကိုပွောတာ။ပနျးသီးတဈလုံးစား။ ဒီကွားထဲမှာ ဗိုကျနညျးနညျးဆာတယျထငျရငျ မုနျလာဥဖြျောရညျတို့ သခှားသီးဖြျောရညျတို့ သောကျလို့ရသေးတယျနျော။ပွီးရငျ အိပျရာမဝငျခငျ တဈနာရီအလိုမှာ Green Teaလေးတဈခှကျလောကျကို ဘီယာလိုသဘောထားပွီးသောကျ။ ဘယျလောကျကောငျးလဲ။
ဒီတော့ ကိုယျ့တဈနလေုံ့းစားထားတာ ဘယျလောကျကယျလိုရီရှိလညျး သိခငျြမှာပေါ့။ အောကျမှာရေးပေးထားတယျနျော။ တဈနကေို့ ၉ဝဝကယျလိုရီကှကျတိပဲ။
ပနျးသီး (၂)လုံး – ၂၃ဝကယျလိုရီ
ဘဲဥပွုတျ (၆)လုံး – ၄၅ဝကယျလိုရီ
Green Tea – ၀ ကယျလိုရီ
ဆနျပွုတျတဈခှကျ – ၁၆ဝကယျလိုရီ
မုနျလာဥဖြျောရညျ – ၃ဝကယျလိုရီ
သခှားသီးဖြျောရညျ – ၃ဝကယျလိုရီ
စုစုပေါငျး – ၉ဝဝကယျလိုရီ
တခြိူ့ Diet Planတှကေ လနဲ့ခြီပွီးကွာတတျတယျနျော။ ဒီနညျးလေးက ၁ဝရကျအတှငျး အဖွပေျေါတာဆိုတော့ အဖွကေိုစောစောသိရတာပေါ့။ ကဲ လှခငျြတဲ့သူတှကေတော့ ၁ဝရကျလောကျအပငျပနျးခံလိုကျတာနဲ့ (၂၂)ပေါငျကပြွီး ဂျေါသှားမှာအမှနျပဲ။ (၁၀)ရကျ အတှငျး ယောကငြ်ျားလေးဆို စျောကွညျ၊ မိနျးကလေးဆို ဘဲကွညျဖွဈအောငျ စမျးလုပျကွညျ့သငျ့တယျနျော။
အခု တငျဆကျပေးလိုကျတဲ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ ၁ဝရကျအတှငျး ၂၂ပေါငျကအြောငျ ၀ိတျလြှော့နညျးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဝတ်အစားတွေ၊အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့အခါမျိုးမှာ နှစ်အပိုင်းအခြားလောက်သာခံမယ်မှန်းသိလျက်နဲ့ ဝယ်မိကြသလို အချိန်တန်လို့သုံးမရတော့တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း ပစ်လိုက်ဖို့ကလွဲ အခြားမစဉ်းစားတတ်ပါဘူး။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံလာတဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်ကိုအဆင်ပြေဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင့်် နည်းလမ်းအချို့ကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.cottonစမှာ wineစွန်းခဲ့ရင် ချည်သားအကျီင်္တွေမှာ အရောင်တောက်တဲ့အစွန်းအထင်းတွေ ပေကျံစွန်းထင်းသွားရင် ချွတ်ဖို့ခက်တတ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် အနီရောင်ဝိုင်စွန်းသွားတဲ့အခါမျိုးမှာရောပေါ့။ဒါပေမယ့် မပူပါပါနဲ့။နည်းလမ်းရှိပါတယ်။သင့်ရဲ့စွန်းနေတဲ့ဝိုင်ကွက်ပေါ်ကို sodaထည့်ပြီး စုပ်ယူနိုင်တဲ့စက္ကူစနဲ့ ပွတ်ပေးပါ။ 2.ဂျင်းဘောင်းဘီsizeစမ်းချင်ရင် တစ်ခါတလေ သင်အလောတကြီးသွားဖို့လိုနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဂျင်းတစ်ထည်ဝယ်မိလို့ …
ပုံမှန်​မဟုတ်​ဘဲ ​ပေါက်​​ပေါက်​ရှာရှာ Diet ​လုပ်​ခဲ့ကြတဲ့ နည်းလမ်း​​​တွေ
အိပ်​ပစ်​မယ်​ အိပ်​​နေတယ်​ဆိုမှ​တော့ မစားဖြစ်​ဘူး​ပေါ့။ အိပ်​​ဆေး​သောက်​ပြီး အိပ်​ပစ်​လိုက်​ကြပါတယ်​။ ဒါမျိုးလိုက်​လုပ်​ဖူးတာ အဆို​တောကြီး ပရက်​စ​လေပါ။ ရက်​​ပေါင်းများစွာ အိပ်​ရာထဲ သတိ​မေ့​မျောခဲ့ပါတယ်​။ ဒါက ဆီးချို နဲ့ နှလုံးကို ဖြစ်​​စေတတ်​တယ်​။ စီးကရက်​​တွေ တဝရှိုက်​ Lucky Strike ကုမ္ပဏီ က ​ကြေငြာဖူးတယ်​။ အချိုသကြား​တွေ စားမယ့်​အစား …
သိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အင်္ဂဝိဇ္ဇာတွေရဲ့အဆိုအရ နှုတ်ခမ်းဆိုတာ သင့်အမူအကျင့်၊စိတ်နေစိတ်ထားကို ကောင်းကောင်းကြီး ဖော်ပြပေးနိုင်တဲ့ အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတဲ့။ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ သင့်နှုတ်ခမ်းပုံစံကိုလိုက်ပြီး သင့်အကြောင်းပြောကြမယ်။ဘလောက်ထိ အနီးစပ်ဆုံးမှန်ကန်နိုင်မလဲ?ကွက်တိကျမလဲ ကြည့်ရအောင်နော်။ ။ 1.ထူထဲနေတဲ့နှုတ်ခမ်း ဒီလိုနှုတ်ခမ်းပိုင်ရှင်တွေဟာ သူများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ မွေးဖွားလာတဲ့ ကြင်နာတဲ့စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သေချာတာကတော့ သင့်ငယ်ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ လေလွင့်ကြောင်တွေကိုအစားကျွေးမယ်၊စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတွေမှာ လုပ်အားပေးမယ်၊နောက် ဘယ်တိရစ္ဆာန်ကိုမဆို အိမ်ခေါ်လာချင်တဲ့သူ၊သင်ဟာ အခြားသူတွေကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ချင်တဲ့ စိတ်အခံရှိသူ။အခြားသူတွေအတွက် …